स्थानीय निर्वाचन : घरदैलो अभियानमा काँग्रेस र एमाले सँगसँगै ! - Kantipath.com
स्थानीय निर्वाचन : घरदैलो अभियानमा काँग्रेस र एमाले सँगसँगै !
भक्तपुर । भोट हाल्न पाँच दिनमात्र बाँकी हुँदा मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा काँग्रेस र एमालेको ¥याली अघिपछि गर्दै घरघरमा आएपछि मध्यपुर थिमिका बासिन्दामा चुनावी रौनक थपिएको छ ।
थिमिका नवीनचन्द्र श्रेष्ठले १८ वर्षपछि यसरी घरदैलोमा स्थानीय नेताहरु भोट माग्न आउँदा उत्साहित बनाएको बताउँदै यसवर्ष युवा उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने बताए।
बोडेका रामचन्द्र प्रजापतिले गाउँकै मानिस फरकफरक पार्टीबाट भोट माग्न घरघरमा आउँदा रमाइलो लागेको बताउँदै यसले चुनावी उत्साह थपेको बताए । जुन पार्टीका नेताले जिते पनि मध्यपुरको विकास हुन्छ भन्ने विश्वास लिएको उनले बताए ।
Previous Previous post: सुर्तीजन्य पदार्थको शतप्रतिशत भागमा चेतनामूलक चित्र वा सन्देश राख्नुपर्ने
Next Next post: हट्यो राप्रपा, गच्छदार सरकारमा आउने